Ahoana ny fomba hanesorana ny fofon'ny fivalanan'ny alika mandrakizay | Tontolo alika
Ny fananana alika dia midika fa andraikitra hikarakara azy io sy hikarakara izay mahatonga azy io ho maloto na ho simba. Na izany aza, ny iray amin'ireo olana mahazatra an'ny alika, na alika kely na lehibe, dia misy ifandraisany amin'ny fofona. Miaraka manokana amin'ny esory ny fofon'ain'alika alika avy amin'ny tany.
Na eny an-dalana ianao, any an-trano, eo am-pandriana, eo amin'ny farafara na ao amin'ny tranon-kenanao, io fofona io dia matanjaka be ary eny, tsy mahafinaritra ihany koa. Soa ihany fa manana vokatra sy fanafody an-trano afaka mamono azy mora foana ianao. Tianao ve hitari-dalana anao hamaha ny olana izahay?
1 Vokatra tsara indrindra hamongorana ny fofon'ny ranon'alika
2 Fitsaboana ao an-trano izay miasa mba hamongorana ny fofon'ny fivalanan'ny alika
3 Maninona ianao no tsy tokony hanasazy ny alikanao noho ny fisotrony ao an-trano
4 Ahoana ny fomba fanesorana ny fofon'ny miaina arakaraka ny faritra
4.1 Amin'ny rindrina
4.2 Avy amin'ny sofa
4.3 Eny an-dalana
4.4 Amin'ny tany
4.5 Avy amin'ny farafara
Vokatra tsara indrindra hamongorana ny fofon'ny ranon'alika
Vahaolana tsotra ...
EOS (1 litatra) Eliminator ...
Raha tsy hampiasa fanafody ao an-trano ianao, na matoky bebe kokoa amin'ny vokatra amidiny mba hialana amin'ny fofon'ain'ny alika dia afaka manolotra safidy vitsivitsy koa izahay.
Ny ankamaroan'izy ireo dia namboarina tamin'ny alàlan'ny vokatra izay tsy manohitra ny fofon'ny mony alika ihany, Izy ireo koa dia afaka mitazona ny katsentsitra na manaparitaka otrikaretina. Tsy tokony hatahotra ianao fa hisy fiantraikany amin'ny biby izany, satria tsy izy ireo, azo antoka tanteraka. Ny sasany tsy hanana karazana fofona akory, farafaharatsiny ho hitanao.
Ary iza amin'ireo no azontsika atolotra?
Enzyme manaparitaka tsifotra. Tena mandaitra izy ireo ary tsy vitan'ny hoe mivoaka fa mivoaka ihany koa, fa koa ho an'ny diky sy mandoa.
Biby Oxi Action Vanish. Izy io dia ampiasaina hanalana tasy amin'ny biby fiompy. Na dia mihatra amin'ny urine koa io.
Fanesorana anzima biolojika ho an'ny biby fiompy. Tsy manala ny fofon'ny ranona fotsiny izy io, fa manadio sy mamindra otrikaretina koa.
AniForte Odor Stop spray famaohana fofona. Mety tsy ny hamafana ireo dian-tongotrao ihany no hamafana, fa ny fofona sisa tavela ihany koa.
Esory ny fofona biby. Ity vokatra EOS ity dia mety amin'ny fiara, sofa, boaty fasika, bozaka sns.
Menforsan scavenger anzima. Izy io dia manala ny fofona sisa tavela, na ny urine farany na ny taloha. Ankoatr'izay dia misoroka ny lokon'ny volony na ny lalan-kely amin'ny lamba sy ny habakabaka izy io.
Fitsaboana ao an-trano izay miasa mba hamongorana ny fofon'ny fivalanan'ny alika
Ny fanafoanana ny fofon'ain'ny alika dia tsy zavatra tsy maintsy ataonao ihany rehefa alika izy ary fantany fa tsy tokony hanamaivana ny tenany ao an-trano izy. Mety ilainao koa izany rehefa mivoaka miaraka aminy ianao, satria fitsipika napetrakao ny mpifanila vodirindrina aminao ka tsy mamofona toy ny rihitra alika ny arabe; na rehefa antitra izy, rehefa antitra ilay mahantra ka tsy afaka misoroka ny fitsofohany.
Noho izany, ny fananana fanafody an-trano maromaro an-tanana fa asa dia hevitra tsara foana. Ary ny zavatra mahazatra dia, toy ny «bleach», mpanadio, mampiasa «fresheners» ... tsy maninona izany fa ny manao azy fotsiny dia ny manafina ny olana, fa rehefa afaka kelikely dia miseho indray.
Ahoana ny fanamboarana azy avy eo? Avelanay eto ny sasany aminao fanafody mahomby. Mazava ho azy, mamporisika anay izahay, miankina amin'ny faritra, ny fitaovana ... mampihatra iray na iray ianao. Ohatra, raha mampiasa peroxyde hidrôzenina amin'ny lamba ianao, dia mety hiafara amin'ny tasy satria nanjary lavitra ilay ranoka ilay loko.
Peroxyde. Izy io dia iray amin'ireo fanafody mahomby indrindra (tadidio fa mahavita manala ra amin'ny akanjo). Zava-dehibe ny fampifangaroanao ny ampahany amin'ny rano sy ny ampahany amin'ny hidrozenina peroxyde ary avelanao hiasa mandritra ny antsasak'adiny farafahakeliny. Raha hitanao fa aorian'io fotoana io sy aorian'ny fanadiovana azy dia mbola maimbo ihany izy, avereno ny fizotrany fa avelao lava izy.
Vinaingitra. Ny vinaingitra dia tsy mpanadio voajanahary fotsiny, fa koa famonoana otrikaretina matanjaka (tadidio fa mahavita mitazona bibikely, parasy ... lavitra ny alika na ny toerana misy azy matetika). Raha hampiasa azy dia afangaro amin'ny vinaingitra ny rano iray. Manoro hevitra anao izahay hampihatra azy amin'ny spray ary avelao izy hiasa mandritra ny 20 minitra.
Sodium bikarbonate. Ny fanaovana soda dia misy tombony be dia be, ho an'ny fahasalamana, isan'andro isan'andro ary eny, mba hialana amin'ny fofon'ain'ny alika avy amin'ny tany na any amin'ny faritra hafa. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy apetakao amin'ny vovoka ianao, alatsaho mivantana eo amboniny (raha vao nesorinao ny urine ary maina dia mazava ho azy). Tsy maintsy avelanao mandritra ny alina izy io ary, amin'ny maraina, miaraka amin'ny borosy na mpanadio banga, esorinao izany.
Voasary makirana. Ny fofon'ny voasarimakirana dia mahery vaika amin'ny ihi, miampy ho mpanala azy io mba tsy hiotan'ny alika any amin'ilay faritra indray. Mba hanaovana izany dia mila afangaro ranom-boasarimakirana 100ml amin'ny rano 50ml ianao. Raha afaka izany, azonao atao ny manampy soda sotro fihinana roa sotro fihinanana. Miaraka amin'ny tsifotra, apetaho amin'ilay faritra ilay fangaro ary avelao mandritra ny 30 minitra.
Maninona ianao no tsy tokony hanasazy ny alikanao noho ny fisotrony ao an-trano
Tompon'ny biby fiompy maro, rehefa miondrika ao anaty trano ny alikany, ny zavatra ataon'izy ireo dia ny misambotra ilay biby ary manendry ny vavam-bava hiantsoantso ny urine mba tsy hikorontana ao anatiny, na hikapoka azy akory.
Zavatra roa no tokony ho azonao:
Manadino ny zavatra nataony ny alika rehefa afaka minitra vitsy, amin'ny fomba tsy hahafantarany izay lazainao, na ny antony mahatezitra azy.
Ny alika dia tsy mahazo mifototra amin'ny sazy. Mila fanabeazana ianao ary mila faharetana. Toy ny zaza kely izy. Maninona ianao no tsy misambotra ny lohan'ny zanakao ary manindry izany amin'ny tany sady mikiakiaka sy mikapoka azy? Eny, na ny alika. Amin'izay ianao tsy hianatra; raha ny marina ny hany zavatra ho fantany dia ny tahotra anao. Matahotra be.
Inona no azonao atao ho setrin'izany?
Mampiasà faharetana ary manandrama manabe azy amin'ny fomba tsara indrindra. Amin'ity tranga ity, miaraka amin'ny fanamafisana tsara. Isaky ny mijery ny filany na izay ilainy izy dia tokony hanome azy fitsaboana. Tokony ho ara-batana izy io, ary rehefa antitra ianao dia afaka manohy ny lokan'ny caresses.
Amin'izay dia ho takatrao fa, raha tsara ataonao izany, dia hahazo loka ianao; fa raha diso no ataonao dia tsy manana ianao.
Ahoana ny fomba fanesorana ny fofon'ny miaina arakaraka ny faritra
Satria fantatsika fa ny alika dia tsy mando ny gorodona ihany, fa mirona ihany koa hanana predilection ho an'ny sehatra hafa, ireto misy fanafody vitsivitsy hanala ny fofon'ny urine arakaraka ny toerana nisy azy.
Ny alika, indrindra ny lahy, dia mikiaka amin'ny fampiakarana ny tongony, izay mihoatra ny gorodona, izay mety handoto ny rindrina. Misy fomba fanamboarana azy ve? Marina ny anao. Makà vilia baolina sy spaonjy. Mampiasà rano amin'ny detergent (zava-dehibe, izay tsy misy amoniaka) ho manasa ny rindrina (tsy esorina amin'ny rindrina ny loko).
Avy eo mandalo taratasy mifoka mba hanala ny hamandoana be loatra ary, rehefa hitanao fa maina dia mamafy vinaingitra kely. Tsy mila mandena azy ianao fa fisorohana fotsiny izany mba tsy hiseho ny fofona.
Avy amin'ny sofa
Ny sofa dia vita amin'ny lamba indrindra, fa misy koa ny hoditra. Manoro hevitra anao izahay hampihatra, na evinaingitra l, na vokatra manokana mety amin'ny fitaovana anaovana ny sofa izy io.
Ho an'ny arabe dia amporisihanay ianao handray iray tavoahangy famaohana feno vinaingitra sy rano (amin'ny faritra mitovy). Rehefa vitanao ny mitsika dia esory ny sasany amin'ireo fangaro ireo dia avelao ho maina irery.
Eo amin'ny gorodona dia manana safidy marobe ianao arakaraka ny karazan-javamaniry misy azy. Raha parety, terrazzo, marbra, seramika ... dia mila mampiasa a ianao mpanadio na fanafody an-trano izany dia tsy hamela marika eo amboniny. Azonao atao ny manandrana soda na vinaingitra na peroxyde hidrogen raha tsy misy na inona na inona satria mando izany.
Avy amin'ny farafara
Toy ny fitsipika ankapobeny, ny alika dia matetika tsy mikiaka amin'ny tompony na ny fandriany, raha tsy marary, tsy mahazaka onitra na efa antitra.
Raha izany no izy dia azonao atao ny misafidy ny hirotsaka peroxyde ho an'ny ravina na vokatra sasany hamonoana otrikaretina sy hanala tasy amin'ny lamba. Amin'ny raharahan'ny kidoro, mandehana amin'ny ranom-boasarimakirana sy vinaingitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Ahoana ny fomba famongorana ny fofon'ny mimi alika